I-Confederate P51 Fighter Combat Review: Isingeniso
I-Confederate P51 Fighter Combat. Basem Wasef
Khawucinge nje ngesithuthuthu esingaqhelekanga, ngoko uthabathe ishumi. Ukuba uyaphupha, ezo zihlobo zeengcinga ze-hyperbolic ezenza ucinga kwakho, uhlobo lwezinto ezikugcina ebusuku.
Umqambi weCopedate Motorcycles kunye nomsunguli uMat Chambers yilelo hlobo lomfana, umcangci wangaphambili okhupha kuyo yonke iindibano onokuyilindela ukusuka kubakhiqizi bezithuthuthu eziqhelekileyo ngenjongo yokudala into entsha ngokutsha.
Ukudalwa kweNkampani ye-Confederate yakutsha yi-P51 Fighter Combat, ibhayisiki elilinganiselweyo elinesibini elidibanisa ne-Birmingham, e-Alabama. Ixabiso le ngqamana yelithi? $ 125,000-oko kukuthi, ukuba ungomnye wabantu abangama-61 abanezixhobo zokuthabatha i-figure-six plunge.
Ngokungafani nezithuthuthu zemveli ezisebenzisa umzimba womzimba weplastiki ukuze zigqoke umbane wazo, i-Confederate P51 Fighter Combat igqoba ngaphakathi ngaphakathi, ibonakaliswe ngeefestile ze-peekaboo ezicacileyo ze-polycarbonate.
Umphefumlo we-Confederate P51 Fighter Combat ngowama-intshi e-cubic 132 (ii-2,163 cc) I-twin e-CnC echitshiweyo ukusuka kwibanga elingu-6061-T6 billet aluminium. Ukuxhaswa kwii-Motors ze-S & S kwaye zakhiwe kwi-Confederate spec, i-56 degree degree kunye ne-oli-cooled powerplant isebenzisa i-Kaase Racing iintloko ukuvelisa i-horse engama-209 kwi-crank (!) Kunye ne-160 lb-ft ye-torque kumavili (!!) . Khawucinge ngamanani amaninzi kwifomathi ye- cruiser format ene-air-cooled injini, kwaye uya kuqala ukuqonda ukuba kutheni le bhayisike ibingqangi. Lelo gunya lihanjiswa nge-clutch ye-racing-spec clutch kunye ne-5-speed transmission ye-gear and over-cut-cut cut. Akukho nto inanto malunga neP51 ayibonakaliyo; nangona i-fuel egcinwe ngaphakathi kwefreyim e-alu aluminium, ioli ye-injini ijikeleza i-cylinder ebonakalayo phantsi kwesihlalo esincinci. I-bhokisi ye-moya nje emva kwekhanda elihamba phambili linikeza inqaku elicacileyo apho i-butterfly i-valve i-valve ifumaneka ukuvula nokuvala nge-throttle. Kwaye i-gear engundoqo kunye neebhanti ibonakala nje ngezantsi kweenjini "V".
Ngaphambili, i-radial emibini ye-2-disc, i-4-piston ibheki ngeBeringer (eyaziwayo ngegalelo labo kwihlabathi lezindiza) inika imisebenzi yokuyeka, ngelixa iinqununu ezine-piston zinyusa emva. Ukumiswa kwangaphambili kulandelwa ngumnqweno owenziwe ngamabhinqa Ngaphambili (kunye ne-coilover shock kunye ne-reservoir), ngelixa umva uqulethe i-multilink coilover ngokufihlakeleyo kunye nomthombo okude. Ubini ukumiswa kwangaphambili nangaphambili, okunikezelwa yiRaceTech, kunokulungiswa kunye nokunciphisa ngokukhawuleza okufutshane kunye nokunciphisa amanxeba. Ukujikeleza iipakethe ezibonakalayo ezimangalisayo ziyivili ze-carbon fiber nge-BST, nge-disc carbon eqinile.
2010 I-Confederate P120 Fighter Black Flag Ifoto yegalari
I-Confederate P51 Fighter Combat Review: I-Ride
Ukusebenza okubonakalayo kwe-Confederate P51 Fighter kubandakanya i-peekaboo drive yokuqala kunye ne-injini yamanzi. Basem Wasef
Ukuqwalasela ukubukeka kwayo, unokukrokrela i-Confederate P51 Fighter Combat yinkomo enqabileyo yebhayisiki ... kwaye inxalenye enkulu, uya kuba yinto efanelekileyo. Kukho umzekelo kwixesha elimalunga nalo lonke ulwazi malunga namava okukhwela iP51, ukusuka kwisiseko sokuqalisa ukuya kubugcisa bokuhamba ngeenxa zonke. Chukumisa i-saddle (eyenziwa ngumculi waseBirmingham wasekuhlaleni) njengoko ufikelela kwiilawuli, kwaye uya kuphawula ukuba yinto yokuchukumisa ngokungekho nto. Vula isitshixo kwaye ipompu yeoli iqala ukusebenza, kunye namabhule amancinci avela ngokubonelela ngeoli. Flip umtshini wokupompa umbane uze ucofe iqhosha lokuqala, kwaye i-V-twin enkulu iya kuphila ngokugquma kwamanzi, ukuhlaziya nokugubungela i-valves butterfly, eguqula i-wrist injini. Isandi sikhulu kwaye isimo sinzulu, ngokukodwa xa ukhwela kwibhayisikili kwaye uyaqonda ukuba isihlalo siyamangalisa (ndingu-5'10 ", kwaye ndiphantse ndimi kuma-tippy-ones onlightslights).
Nangona i-clutch ye-hydraulic ilula ukuzibandakanya kwaye ikhutshwe, kuthatha inyawo elomeleleyo ukuhambisa iqhosha lokutshintsha, elibandakanya iqhosha eliqinileyo. I-torque ye-injini iza kwi-thick and strong, kwaye ukukhawuleza iyanqwenela kodwa ayiyikuphuma ngaphandle kokulawula okanye umbane okhawulezayo njengento ephezulu. Kukho umoya wegunya njengoko i-P51 igxotha phantsi kwendlela, kunye nenqanaba elimangalisa lokuthotyelwa kokumiswa (ngokubonga, inxalenye, kwinto yokuba abantu baseRaceTech badibanise kunye nezicwangciso ezingaphezulu kwexesha eliqhelekileyo).
Ukugqithisa i-P51 ngeCos Angeles National Crest kwakudinga ukucinga kwangaphambili; ukudibanisa kwe-240mm yangemva komtya, i-wheelbase ende engama-62,5 intsuku, kunye nokudibanisa ngokukhawuleza kwakuthetha ukuba iinkalo ezincinci zifuna ukunakekelwa, njengoko le nto ininzi yebhayisikili ukuba iqhutywe ngeenxa zonke. Kukho umboniso wemidlalo yokubukela iiforki ze-Girder zishukunyuka kwaye zisehla njengoko ziphosa izibonda, kunye nokuvakalelwa okufanayo kwidrama njengendlela yokubeka iliso kwizithuthi. ... ngokukodwa, ukuba ukhwela i-Confederate kuyo nayiphi na indawo ehlala kuyo, ixesha elongezelelweyo lohlahlo lwabiwo-mali ukuphendula imibuzo kwiimpawu zecala kunye nezitishi zegesi. Amabhuleki amnandi ngokumisela ukubonelela amandla (kubonga kulawo maBeringers amabanga), kwaye emva kokuzibophezela ukuxhomekeka, i-P51 idlulisela amacangca ngokucacileyo nangempumelelo.
Ngaba i-Confederate P51 Fighter idibana nomntu wonke? Hayi ngekhe. Kodwa abo bafuna uphawu lwe-iconoclastic kunye nokungathandabuzekiyo lwezithuthi ezihamba ngevili ezimbini, le nxalenye ye-aluminium kunye ne-carbon fiber indalo izalisekile into encinane engazange ukwazi ukuba uyayidinga.
I-Confederate P51 Fighter Combat Review: Iinkcukacha
I-P51 ye-P51-style ifayile yokubhaliweyo kunye nesakhelo. Basem Wasef
Injini: ii-intshi ezingama-cubic 132 (2,163cc) i-2 degrees-cooled V-twin
Ukuhanjiswa: Incwadana ye-5-speed speed, gears straight-cut
Amandla e-Fuel: 3.75 gallons
Ukumiswa: I-front-style ye-girder, i-coilover yangaphambili ye-link (ngeRaceTech)
Amabhayiseki: i-4-piston, i-quad-dis ngaphambili, i-4-piston enye yangemva
Isisindo se-Curb: 582 emanzi (iqikelelwe, ingeyokugqibela)
Ixabiso: $ 125,000
I-Angular Momentum Inani leNombolo ye-Quantum Inkcazo
Indlela yokufumana i-pOH eKhemistry
UkuLawula i-MySQL Data
Indlela yokwazi i-Archangel Chamuel
Umbulali we-Whale Dorsal Fin Collapse